Ukuqonda umhlaba kunye neMbali yayo
Siphila kwixesha elityebileyo elivumela ukuba sihlolisise inkqubo yelanga kunye neerbotic probes. Ukususela kwiMercury ukuya ePluto (nangaphezulu), sinamehlo esibhakabhakeni ukusitshela ngezo ndawo ezikude. Isixhobo sethu sendawo sihlola kwakhona umhlaba ukusuka kwindawo kwaye sibonise ukuhlukahlukana okungafaniyo kweendawo ezisemhlabeni. Iipulatifomu zokujonga umhlaba zilinganisa umoya wethu, isimo sezulu, isimo sezulu, kwaye sifunde ubukho kunye nemiphumo yobomi kuzo zonke iinkqubo zeeplanethi.
Iingcali zenzululwazi zifunda ngeMhlaba, ngakumbi ziyakwazi ukuyiqonda ixesha layo elidlulileyo kunye nekamva layo.
Igama lomhlaba wethu livela kwi-Old English neJamani igama elithi eorðe . Kwimbali yamaRoma, umfazikazi womhlaba nguTususus, oku kuthetha umhlaba ocebileyo , ngoxa unkulunkulukazi ongumGrike wayenguGaia, u- terra mater , okanye uMama womhlaba. Namhlanje, siyibiza ngokuthi "Umhlaba" kwaye isebenza ukufundisisa zonke iinkqubo kunye neempawu zayo.
Umhlaba wazalwa iminyaka eyi-4.6 yezigidigidi ezedlulileyo njengegesi eliphakathi kwegesi kunye nothuli olubandakanyekayo ukudala i-Sun kunye nokuphumla kwelanga. Le yindlela yokuzalwa yeenkwenkwezi kwindalo yonke . Ilanga lakhiwa kwinqanaba, kwaye iiplanethi zaye zaziswa kuzo zonke ezinye izinto. Ngokuhamba kwexesha, iplanethi nganye yafudukela kwindawo yayo yangoku ijikeleza ilanga. Iinyanga, izindandatho, i-comets, kunye ne-asteroids nazo ziyinxalenye yendlela yokwenziwa kwelanga kunye nokuziphendukela kwemvelo. Umhlaba oPhambili, njengamanye amaninzi ehlabathi, kwakuyiklasi edibeneyo ekuqaleni.
Icolile kwaye ekugqibeleni iilwandle zayo zenziwa ngamanzi eziqulethwe kwiiplanethi zemvelo ezenza iplanethi yasana. Kwakhona kunokwenzeka ukuba ii-comets zadlala indima ekuveliseni amanzi oMhlaba.
Ubomi bokuqala eMhlabeni buvela kwiminyaka eyi-3.8 yezigidigidi ezedlulileyo, ubuninzi kwiindawo zamanzi okanye kwiindawo zokuhlala. Kwakuqulethwe ngezilwanyana ezinomnye.
Ngexesha elide, bahlakulela ukuba babe izityalo ezixakeke ngakumbi kunye nezilwanyana. Namhlanje iplanethi ibamba izigidi zeentlobo zezityalo ezahlukeneyo kunye nezinye zifunyaniswa njengoko izazinzulu zihlola ulwandle olunzulu kunye ne-polar ices.
Umhlaba ngokwawo uguqukile, kwakhona. Kwaqala njengombala otyhidiweyo wedwala waza wagqitywa. Emva kwexesha, i-crust yayo yenziwe ngamacwecwe. Amazwekazi kunye nolwandle bahamba bahamba kuloo macwecwe, kwaye isisombululo samacwecwe yinto eyenza ukulungelelanisa izinto ezinkulu kwihlabathi.
Indlela Imibono Yethu Yomhlaba Yashintsha ngayo
Abafilosofi bokuqala babeka umhlaba kwiziko lehlabathi. U-Aristarko waseSamos , ngekhulu lesi-3 BCE, waqikelela indlela yokulinganisa umgama ukuya kwi-Sun kunye neNyanga, kwaye wazimisela ubungakanani bawo. Waphinda wagqiba kwelokuba uMhlaba wawujikeleza i-Sun, ingavumi ukuba i-Polish astronomer uNikolaus Copernicus yashicilele umsebenzi wakhe obizwa ngokuba yi- On Revolutions ye-Celestial Spheres ngo-1543. Ngaloo ndlela, waphakamisa ingcamango ye-heliocentric yokuba umhlaba awungeyona indawo yehlabathi kodwa endaweni yoko yatshisa ilanga. Inyaniso yenzululwazi yafika ekulawuleni isayensi yeenkwenkwezi kwaye isele ibonakaliswe yiphina inani leentlanganiso kwiindawo.
Emva kokuba i-theory-centered theory isetyenziselwe ukuphumla, izazinzulu ziye zahla ukufunda iplanethi yethu kwaye yintoni eyenza ikhathaze.
Umhlaba ubhalwe ngokukodwa ngentsimbi, i-oxygen, i-silicon, i-magnesium, i-nickel, isulfure, kunye ne-titanium. Ngaphezulu kwama-71% omhlaba wayo uphelelwe ngamanzi. I-atmospheric i-77% i-nitrogen, i-21% yomoya-mpilo, i-argon, i-carbon dioxide kunye namanzi.
Abantu babecinga ukuba uMhlaba uphantsi, kodwa loo mbono yafakwa ekuphumeni kwimbali yethu, njengoko izazinzulu zalinganisa iplanethi, kwaye kamva njengezikhupha ezindizayo kunye neenqwelo zezixhobo zabuya imifanekiso yehlabathi elijikelezayo. Siyazi namhlanje ukuba uMhlaba unqabileyo elincinane elilinganiselwa kumawaka angama-40,075 ngeenxa zonke kwi-equator. Kuthatha iintsuku ezingama-365.26 ukwenza olunye uhambo olujikeleze iLanga (elibizwa ngokuba "ngumnyaka") kunye neekhilomitha ezili-150 ezide ukusuka eLangeni. Ijikeleza kwi-"Goldilocks zone zone" ye-Sun, ummandla apho amanzi amanzi abekhona emhlabeni womhlaba oyingxondorha.
Umhlaba unesitellite esisodwa sendalo, iNyanga ede kumgama wama-384,400 km, kunye nekhilomitha ezili-1,738 kunye nobukhulu be-7.32 × 10 22 kg.
I-Asteroids 3753 i-Cruithne kunye ne-2002 AA29 iyanenkqonkqo ubudlelwane bomzimba kunye noMhlaba; azinjalo ngokwenyanga, ngoko izazinkanyezi zisebenzisa igama elithi "umlingane" ukuchaza ubudlelwane babo kunye nomhlaba wethu.
Umhlaba wethu awuyi kuhlala ngonaphakade. Kwimizuzu engama-5 ukuya kweyesibhozo yezigidi, i-Sun iza kuqala ukuvuvukala ibe yinkwenkwezi enkulu ebomvu . Njengoko i-atmospheric yayo iyanda, inkwenkwezi yethu yokuguga iya kubangela ieplanethi zangaphakathi, zishiye emva kwezinto eziqingqiweyo. Iiplanethi zangaphandle zingaphaya ngakumbi, kwaye ezinye zeenyanga zingadlala amanzi amanzi kwiindawo zawo, ixesha. Lona luthandwa kakhulu kwizesayensi zobuqhetseba, ukuvelisa amabali ngendlela abantu ekugqibeleni bayafudukela ngayo eMhlabeni, bahlalise mhlawumbi malunga neJupiter okanye baze bafune amakhaya amatsha kunye nezinye iinkqubo zeenkwenkwezi. Kungakhathaliseki ukuba abantu benza ntoni ukuze baphile, iLanga liya kuba yintshontsho emhlophe, iyancipha kwaye ipholisise ngaphezu kweminyaka eyi-10-15 yezigidigidi. Umhlaba uza kudala.
Ama-Villains aphezulu aMahlanu aphezulu eShakespeare Plays
USalvator Mundi: Udwebo olutsha olwenziwa ngu-Leonardo da Vinci
Abasetyhini baseKhemistry - Abafazi bamaKhistani abaziwayo
Ndingafumanaphi Iimpendulo NgeNdlu Yam?
Imfazwe yaseBoshin ka-1868 ukuya ku-1869